China Diesel Hydraulic Excavator CE480-8 ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ngwaahịa |Bonny
1. CE480-8 bụ ọgbọ ọhụrụ nke mmanụ dizel na-ebugharị nke BONNY, na-eji Cummins 298kW engine engine dị elu, na-eji ngwá ọrụ na-arụ ọrụ ike dị elu nke e mere ọhụrụ, usoro nchịkwa ọkụ eletrik na nkà na ụzụ ndị ọzọ dị elu, na-eme ka onye na-egwupụta ihe. dị ike na ngwa ngwa, na-eme ka nrụpụta mmepụta dị ukwuu.
2. CE480-8 na-anabata njikwa ike eletrọnịkị ziri ezi na njikwa mgbagha eletrọnịkị, na-ekesa nnabata ike nke omume ọ bụla n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ ziri ezi na nke ọma, ka enwere ike ịbawanye nrụpụta ngwaahịa a nke ọma ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma.
3. CE480-8 kwadoro ya na Cummins diesel engine, ikuku na-agbaso ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi kachasị ọhụrụ, a pụkwara ịhọrọ ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ na nkọwa mmanụ ụgbọala.
4. CE480-8 kwadebere ya na akụrụngwa hydraulic a ma ama na akụkụ ya.Ndị na-egwupụta ihe na-egwupụta ihe nke BONNY na-eji nfuli isi ụdị plunger agbanwe agbanwe nwere njikwa ike eletrọnịkị, nke nwere ọtụtụ ọrụ dị ka njikwa ike eletrọnịkị, mmalite mbugharị efu, mgbaba kacha nta na-anọpụ iche na ngbanwe nrụgide.
5. CE480-8 na-agbaso usoro hydraulic hydraulic Japanese Kawasaki, na-amalite igbu egbu, nkwụsị nke breeki, mmalite na ọrụ ngbanwe nrụgide, mgbe ọ na-eju afọ ngwa ngwa mgbe ọ na-eme ka nkwụsi ike nke ọrụ igbu egbu, ọ bụ nkwa dị ike maka ịrụ ọrụ dị elu.
6. BONNY mining hydraulic excavator adopts the automatic centralized lubrication system of the international famous brand, and adopts the adjustable control system to-akpaghị aka mmanu nkwonkwo nke dum igwe na oge na quantitative etiti oge, ibelata ike nke mmezi ọrụ na mbenata mmezi oge.
7. BONNY CE480-8 ngwaọrụ na-arụ ọrụ na-eji ngwaọrụ arụ ọrụ ọhụrụ emebere ka ọ dịkwuo mma nhazi nke ebe ọ bụla hinge, jikọtara ya na cylinder hydraulic kacha mma na China, iji mee ka arụmọrụ na ntụkwasị obi dịkwuo elu.
CE480-8 bụ nnukwu hydraulic excavator nke 50-ton nke BONNY.A na-eji mmanụ diesel na-arụ ya ma jiri injin na-ebugharị ya.Ngwa abụọ na-arụ ọrụ nke backhoe na shọvel n'ihu bụ nhọrọ.Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na-ewu, Ngwuputa Ngwuputa, iwu nchekwa mmiri na njem.Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, dị mma, dị mfe iji rụọ ọrụ na idobe ya.
Ibu igwe (Backhoe) t 48
Ibu igwe (shọvel ihu) t 49
Ike ịwụ (Backhoe) m3 1.0-2.5
Ikike ịwụ (Ihu-shọvel) m3 2.0-3.0
Enyere ike/ọsọ kW/rpm 298/1800
Oke.eruba L/min 2 × 350
Oke.nrụgide ọrụ MPa 31.4/34.3
Oge ịgba ígwè ọrụ s 16
Ọsọ ọsọ rpm 7.3
Ọsọ njem km/h 3.2 / 5.2
Oke.na-adọkpụ ike KN 354
Oke.igwu ala iru mm 11410 8550
Oke.igwu ala omimi mm 7070 2770
Oke.igwu ala elu mm 11530 9920
Oke.nbudata elu mm 7110 7370
Oke.igwu ala ike nke Stick KN 260 269
Max.breakout ike nke ịwụ KN 243 271
Nke gara aga: Diesel Hydraulic Excavator CE400-8
Osote: Diesel Hydraulic Excavator CE650-8